BisheshPati | Trusted Online News Protal in Nepal नृत्यले आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउँछः सुवास बुढाथोकी - BisheshPati
नृत्यले आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउँछः सुवास बुढाथोकी
BY BISHESHPATI NEWS
काठमाडौं ।३८ वर्षसम्मको नृत्य अनुभव बोकेका भक्तपुर चाँगुनारायणमा जन्मिएका सुवास बुढाथोकी फेरि नृत्य निर्देशनमा फर्किएका छन् । केही समय अगाडि यस क्षेत्रबाट सन्यास नै लिए पनि कामको नृत्यको मोहले फेरि निर्देशनमा फर्किएको बताए ।
चलचित्रका गीत मात्र होइन उनी आफ्नै हिमालय कला मन्दिरमा समेत नृत्य सिकाइरहेका छन् । उनले एक दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा नृत्य सिकाइसकेका छन् । नृत्य निर्देशनमा राम्रो दखल भएकै कारण उनले शिव श्रेष्ठदेखि अन्य थुप्रै कलाकारसँग काम गरिसकेका छन् ।
भारतमा प्रवेश बान्तवासँग नृत्य सिकेर नेपाल फर्किएर आएपछि उनको संघर्ष र उपलब्धीबारे कुराकानी गरिएको छ । सोही अन्तर्वार्ता
नृत्य क्षेत्रमा कसरी छिर्नु भयो ?
मलाई सानैदेखि नाच्न रहर थियो । स्कुलमा सानोतिनो कार्यक्रम हुँदा पनि नाच्न रमाएर गइहाल्थेँ । यस्तै क्रम चल्दै गर्दा एक दिन २०४३÷४४ सालतिर भक्तपुरमा नवदुर्गा कला मन्दिर खोलेको थियो । मैले त्यहीँबाट नृत्य सिक्न सुरु गरेँ । यसरी नृत्यबारे जानकारी लिइरहँदा प्रवेश वान्तवासँग भटे र उहाँको साथसँगै म नृत्यमा अघि बढेँ ।
सन्यास लिएर बस्नु भएको थियो । तर, अहिले फेरि नृत्य क्षेत्रमा तपाइँको किन पुनरागमन ?
होइन मैले छोडेको छैन । मैले यतिमात्र हो पक फिल्मको कोरियोग्राफीबाट चाहिँ विश्राम लिएको हुँ । त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वकाल थियो । फिल्म हल सबै बन्द थिए । त्यसैले म पछि हटेको हुँ । तर, नृत्य सिकाउने कामबाट भने मैले कहिल्यै पनि पछि हटेको छैन ।
अहिले के-केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले म आफ्नै नृत्य विद्यालय हिमालय कला मन्दिरमा भाइबहिनीहरूलाई नृत्य सिकाइरहेको छु । अस्ती भर्खरै मात्र पनि चारवटा जति म्युजिक भिडियो गरियो । जुनबाट मैले सर्वोत्कृष्ट कोरियोग्राफरको अवार्ड पनि पाएँ । अहिले म आफ्नो व्यवसाय पनि सम्हाल्दै छु ।
भिडियो कोरियोग्राफी गर्ने मौका आइरहेको छ ?
अफर त आइरहेकै हुन्छ । तर, मेरो आफ्नै नृत्य विद्यालय भएको कारण पनि म समय दिन खासै सकेको छैन । तै पनि मैले भ्याएसम्म गरिरहेकै छु ।
आफ्नो कला मन्दिरमा बाहेक के–केमा काम गर्नुभइरहेको छ ?
अहिले कला मन्दिरबाहेक म्युजिक भिडियो, डान्स वर्कसपहरू लिन बोलाइरहेका हुन्छन् । कतै डान्स सिक्न पनि बोलाइरहेका छन् । तर, अहिले म आफैँ पनि एउटा चलचित्र निर्माण गर्ने सोचमा छु, हेरौँ के हुन्छ । तर, सकेसम्म चलचित्र बनाउने कोसिसमा छु । सानेतिनो व्यवसायमा पनि अल्झिएको छु । त्यसैले थोरै ढिला भइरहेको छ चलचित्र निर्माणको काममा ।
साना भाइबहिनीलाई नचाउनु र ठूला स्टारहरूलाई नचाउनुमा कस्तो भिन्नता पाउनु भयो ?
हेर्नुहोस्, नृत्य भनेको एउटा कला हो । मैले नचाउन त नाम चलेका कलाकार विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, सज्जा मैनालीजस्तै थुप्रै कलाकारलार्य नचाएँ । तर, साना भाइबहिनीलाई नचाउनुमा छुट्टै आनन्द आउँछ । प्रायः फिल्म क्षेत्रको सबैजसो कलाकारसँग मैले काम गरिसकेको छु ।बच्चासँग नाच्दा आफैँ बच्चा भएजस्तो लाग्ने, छुट्टै मज्जा आउने रहेछ । बच्चाबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाइन्छ । यो नृत्य एउटा कला हो, जति सिके पनि पुग्दैन ।
तपाइँ यस क्षेत्रमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म यस क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु । किनकि यो मेरो कर्म क्षेत्र हो । मलाई यस क्षेत्रमा लागेर कुनै गुनासो नै छैन । जति नाचिन्छ, उति नै धेरै बाँचिन्छ । म यस क्षेत्रबाट सम्पूर्ण रुपमा खुसि छु ।
यस क्षेत्रबाट आम्दानीको स्थिति के छ ?
यस क्षेत्रबाट आम्दानी हुँदैन भनेर म भन्दिनँ । यसमा आफूले जति गर्न सक्यो उति नै धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ । सर्वप्रथम यस क्षेत्रमा लाग्दा काममा इमान्दारिता र पेसाप्रति लगनशिल हुनुपर्छ । गफ जानेर हुँदैन, यस क्षेत्रमा त कतिले त गफै मात्र पनि लगाएर खाएका छन् । तर, आफ्नो पेसाप्रति लगनशील भएर काम गरे नहुने केही छैन ।
कतिवटा चलचित्रमा नृत्य निर्देशन गरिसक्नु भयो ?
मैले डेढ दर्जनभन्दा धेरै चलचित्रमा नृत्य निर्देशन गरिसकेँ । मैले नेपालीमा मात्र होइन अन्य भाषाको गीतमा पनि नृत्य निर्देशन गरिसकेको छु । तर, मलाई अहिले चलचित्रमा भन्दा पनि नयाँ मान्छेहरूलार्ई सिकाउन मनपर्छ । मैले सिकाएका भाइबहिनीहरू सफल भएका छन् । त्यसैले मलाई आनन्द लाग्छ ।
लकडाउनपछि मनोरञ्जनको क्षेत्र कुन अवस्थामा छ ?
अहिले चलचित्रको क्षेत्र खासै राम्रो देख्दिनँ म । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न ठाउँका हलहरू बन्द हुने तथा आफ्नै ज्यानको पनि सुरक्षा नहुने भएकाले अस्तव्यस्त छ । तर, मेरो डान्स क्लासलाई भने खासै प्रभाव परेको छैन । मैले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छु ।
नृत्यका भावी पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
सर्वप्रथम, त यस क्षेत्रमा आउने हो भने मिहेनत, इमान्दारिता र पूर्ण रुपमा सिकेर लाग्नुहोला । यस्तो चिज आफूसँग राख्नुहोस् जुन चिज सधैँ काम लागिरहोस् । यो चिज तपाईँको हतियार बनोस् । आफ्ना गुरुहरू तथा जनाकारहरूप्रति सम्मान तथा आफूभन्दा सानालाई माया देखाउनुहोस् । आफूले जानेको कुरा सिकाउन कहिल्यै पनि पछि नहट्नुहोस् ।
नृत्यले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदा के के हो?
नाच तौल घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो । जुन क्यालोरी घटाउन, मांसपेसीहरू मजबुत पार्न, शरीरलाई टोन गर्न सहयोग गर्दछ । नृत्यहरूले भावनाहरूको सकारात्मक शुल्क दिन्छ, मुड उच्च पार्छ, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउँदछ । नृत्य गर्दै, तपाईं अनुशासन प्रशिक्षण र प्रेरणा कायम राख्न सक्षम हुनुहुनेछ । यो केवल नियमित गतिविधिहरू मात्र होइन, रमाइलो पनि हो । रासस
गभर्नर प्रकरणमा भ्याकेट निवेदन लैजान सम्भव छ ?
गठबन्धनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको उम्मेदवार भोलि बेलुकासम्म टुंगो लाग्ने
सत्ता गठबन्धनमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरका मेयर र उपमेयरमा सहमति
माधव नेपालको चुनावी सन्देश- एमाले छोडेर किन विद्रोह गर्ने अवस्था आइलाग्यो तथ्य र प्रमाणहरू पस्किनुस्
निर्धारित मितिमा निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा फस्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रहरी प्रमुखको अधिकार कटौती तयारी
निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा बाचा गराउन ७९ दललाई आयोगले बोलायो
चुनावी तालमेल मोडालिटीबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा सत्तागठबन्धन बैठक जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने माओवादीको निर्णय
एमसीसीमा प्रचण्डको अडान !
आफ्नै ताकतमा चुनाव जित्ने कुरालाई प्राथमिकता, तालेमेल गर्दा गठबन्धनकै बीचमा- प्रचण्ड
१४ प्रतिशतसम्म गाडी भाडा बढाउने सरकारको निर्णय
सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश भर्सेस मुख्य रजिष्ट्रार
कानुनविद् प्रतिशोधका आधारमा काउण्टर महाभियोग ल्याए एमाले देशद्रोही ठहरिन्छ – कानुनविद्
पल शाहले आजै प्रहरीमा आत्मसर्मपण गर्ने तयारी
विशेष मिडिया प्रा लि काठमाडौं नेपाल
फोन :- ९८४०५१२८७२
सूचना विभाग दर्ता नं.२७८७ / २०७८-०७९
अध्यक्ष संचालक: विमल अधिकारी
प्रबन्ध निर्देशक: अम्बिका घिमिरे
सम्पादकः विनोद बराल
व्यवस्थापकः सम्राट वली,विवेक महरा
सल्लाहाकारः रमेश पौडेल
वरिष्ठ सम्वाददाताः योगेश ढकाल